Ngathi-UNIKE Technology Limited
Iinjineli zethu zineminyaka engaphezu kwe-10 yamava e-LED kwaye iqela lethu lokuthengisa elinokuthenjwa liya kubonelela ngenkxaso yobuchwephesha obuphezulu kunye neenkonzo zokukunceda wandise intengiso yakho ngokulula kwaye uqinisekise ukuba unamava amnandi eshishini. Sinegunya lokulawula umgangatho kuwo onke amabakala emveliso, kubandakanya ulawulo lwezixhobo ezizayo, inkqubo yokujonga umgangatho, ukuhlolwa kokuphuma kunye nokuvavanywa kwesihlobo. Ngapha koko, sinokuseka ulawulo lwe-AQP kunye ne-SPC ngokusekwe kwiimfuno zabathengi. Zonke ezi zinto zisenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi. Umzi-mveliso wethu uxhotyiswe ngokufanelekileyo ukuze ulungele iimfuno zakho zokukhutshelwa ngaphandle, uluhlu olubanzi, amava atyebileyo kunye nokusebenza kwengqondo ephezulu yeQC yethu, sinokunciphisa zonke iindleko ezingeyomfuneko kuwe. Impumelelo yethu ixhomekeke kulwaneliseko nokuzithemba kwabaxumi bethu kwinto esiyenzayo nendlela esiyenza ngayo.
Sikhetha ngononophelo zonke izinto kwaye siqiniseke ukuba zonke iimveliso ezigqityiweyo kubathengi banokudibana kwaye nangaphezulu kokulindelekileyo. Sisebenzisa ikakhulu i-LED evela kwiiLumileds, iOsram kunye neCree, umbane ovela kwi-Mean Well, i-Philips, i-Inventronics, i-Sosen, i-Lifud kunye ne-Done, kunye ne-brand yethu ye-UNIKE yamandla. Lilonke, iimveliso zethu zinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo ukusuka esiphelweni esiphakathi ukuya kwimakethi ephezulu. Uninzi lweemveliso zethu lunokunika iminyaka emithathu okanye emihlanu yewaranti kubathengi abanokukhetha kuyo. Kwangaxeshanye, sinako ngokusesikweni iimveliso ngokweemfuno zabathengi ukwandisa isiqinisekiso somgangatho okanye ixesha lobomi ukuya kwi-7 okanye kwiminyaka eyi-10.
Sinokubonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM kubathengi. Sinokwenza i-OEM okanye senze ukumakisha kwe-LOGO yasimahla, kwaye sinokwenza ngokwezifiso ibhokisi yemibala ngokunjalo.
Injongo ye-UNIKE "ngumgangatho wokuqala, ukujolisa kwabaThengi, ukuthembana, inkampani efanelekileyo".
Inkampani yethu ineqela lezatifikethi zemveliso yelungelo elilodwa lomenzi, uninzi lweemveliso zethu zi-CE, RoHS, PSE, SAA kunye ne-UL, kunye ne-DLC evunyiweyo, ethengiswe kumazwe angaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela, kwaye yaphumelela indumiso eyahlukeneyo yabathengi , kunye nabathengi abaninzi ukuseka ubudlelwane bexesha elide bokusebenzisana.